Published August 13, 2020 at 11:15 PM CDT
Barnaamijyada 'Head Start' waxay bilaabayaan barashada shaqsiga ah bisha Sebtember 2deeda. Caruurta seddex jirka ah iyo afarta sano jirka ah waxay xirtaan maaskaro maalinta oo dhan, marka laga reebo markay banaanka joogaan, wax cunayaan ama nasanayaan.
Agaasimaha Fulinta ee Hay'adda Waxqabadka Bulshada ee Siouxland ayaa sheegay inay muhiim u tahay koritaanka ilmaha inuu ku sii jeedo fasalka oo uu wax ka barto macallimiintooda. Hay'adda Waxqabadka Bulshada waxay ka shaqeysaa 29 fasallo Madaxa Gobolka iyo Head Start oo ku yaal magaalada Sioux City. Waxaa dib loo xiray badhtamihii bishii Marso sababtuna waa masiibada COVID-19. Fasalada qaar ayaa dib loo furay xagaagii si ardayda looga caawiyo inay ugu diyaar garoobaan Dugsiga barbaarinta caruurta deyrta. Sannad dugsiyeedkii la soo dhaafay, in kabadan 425 arday ayaa dhigta barnaamijyada Head Start. Sanadkan, tirada ayaa laga dhigi doonaa 350.
Dhimasho dheeraad ah oo ah COVID-19 ayaa laga soo sheegey Iowa iyada oo tirada kiisaska cudurka coronavirus ee la xaqiijiyay ay gaartay 50,000 gobolka. Raad-raacaha fayraska ee internetka ee gobolka ayaa muujinaya toddobo geerida la soo sheegay subaxnimadii maanta, taasoo guud ahaan gobolka ka dhigeysa 954. Waxaa jira shan kale maanta.
Goobtu waxay kaloo muujisay boodbood ka badan 600 oo kiis oo la xaqiijiyay subaxnimadii maanta, taasoo guud ahaan gobolka ka dhigeysa ku dhawaad 50,200. Gobolka Woodbury wuxuu leeyahay 16 kiis oo cusub oo cudurka coronavirus ah maanta, iyadoo wadar ahaan 3,760 xaaladood iyo 52 loo dhintey. Gobolka Dakota ee gobolka Nebraska wuxuu leeyahay labo kiis oo cusub.
Local NewsLocalIowaNebraskaSTEMSouth DakotanewsCOVID-19SomaliHead Start
Khamiista, Waaxda Caafimaadka Dadweynaha ee Iowa ayaa soo weriyey 13 dhimasho oo dheeraad ah iyo 650 tijaabo oo dheeri ah oo 24 saac ah.Caafimaadka…
Waaxda Iowa ee Caafimaadka Dadweynaha ayaa soo weriyey lix kale oo Iowan ah inay u dhinteen dhibaatooyin la xiriira COVID-19 24-kii saac ee la soo…
Guddoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynolds wuxuu soo saaray bayaan musiibo ah isagoo ka jawaabaya nidaamka cimilada xun ee ka gudbay Iowa sababayna waxyeelo…